Duur-joogteenna – dhaxal lumay! | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Duur-joogteenna – dhaxal lumay!
Muqdisho – Duur-Joogta dhaqan ahaan waxaa loo dhiraandhiriyaa noole siiba sanku-neefle aan la dhaqan gelin. Hayeeshe, waxaa timid in lagu daro dhamaan dhirta, noolaha yaryar iyo ilma-aragtida ku nool duur—goob aanay dadku ku lahayn raad saameyn leh.
Previous: Haweeney Bisadaha gabaad ku siisa aqalkeeda si aysan qabow ugu dhiman
Next: Maalinta Caalamiga ee Duurjoogta